Soo Iibso Kiniinka Pueraria Mirifica & Papaya Extract Chewable Tablet Naas Weyn - Rar bilaash ah & Cashuur la'aan | WoopShop®
Kiniiniga Pueraria Mirifica & Papaya Extract Calalinta Calaacalka Naaska Weyn
dib u eegista 45
$ 42.99 qiimaha joogtada ah $ 64.99
Xidhmada Dhalooyinka 2 Dharka 1 Dhalooyinka 12 Dhalooyinka 4 Dhalooyinka 3 Dhalooyinka 8 Dhalooyinka 6
Dhalooyinka 2 Dharka 1 Dhalooyinka 12 Dhalooyinka 4 Dhalooyinka 3 Dhalooyinka 8 Dhalooyinka 6
Kiniiniga Pueraria Mirifica & Papaya Extract Chewable Tablet For Big Naas - 2 Dhalo gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Shayga: Kaabsalka Ballaarinta Naasaha
Faahfaahinta: 80 kumbiyuutarada / Dhalo
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Budada Puerarin Papaya oo isku urursan
Shaqeynta: Ballaarinta Naasaha
Isticmaalka La Soo Jeediyay: 1 Pcs Markasta, Saddex Jeer Maalintii
Habka Kaydinta: Khatimidii, Ku hay qabow, iyo Meel Qallalan
Oggolaanshaha Wax Soosaarka.: SC11337108200263
Heerarka Wax Soo Saarka: SB / T 10347
Cunnooyinka aan habboonayn: Dhallaanka iyo Carruurta Yaryar
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin: Isomalt, D-mannitol, lactose, budada papey, Pueraria root root concentrated, budada soyabean degdega ah, budada jeermiska budada ah, budada wolfberry urursan, budada collagen kalluunka, magnesium stearate
Isticmaalka: Dadka waaweyn, qaado hal 1 Kiniin / waqti, 3 jeer maalintii (Fadlan la tasho dhakhtar si aad u ogaatid qiyaasta saxda ah ee miisaanka jirkaaga), la calaliyo, oo ah kaabis cunto ahaan.
Habka Kaydinta: Waa la shaabadeeyey, ku kaydi meel qabow oo qalalan
Pueraria Mirifica waa warshad "multifunctional" dhab ah oo si fiican u shaqeysa marka si sax ah loo qaato. Kaliya u oggolow inay nuugto oo sii waqti jirkaaga si aad ula qabsato. Ha ka baqin isbeddelada aad ku socoto inta lagu jiro daaweyntaada. Waa waayo-aragnimo nolosha beddelaysa. Waxaad si dhab ah u iftiimin doontaa daaweyntaada kadib. Jidhku wuxuu dareemayaa da 'yar, tamar, wuxuuna u muuqdaa mid ka sii wanaagsan. Maqaarku runtii xaaladdiisu waa heer sare. Qaarkood xitaa uma baahna looshin inta lagu jiro daaweynta PM. Maqaarku wuxuu ka buuxo nafaqooyin wuxuuna dareemaa habsami & dabacsanaan. Pueraria Mirifica waxaa sida ugu fiican loogu yaqaanaa in loo isticmaalo daaweyn kale ee naas-nuujinta. Halkii lagaa geli lahaa silikoon, waxaad u aadi kartaa habka dabiiciga ah.
Papaaygu waa mid nafaqo-badan leh, wuxuu u roon yahay beeryarada, dheef-shiidka, iyo kalyaha, Iyada oo kor u qaadeysa difaac, quruxda.
Waxaan doorannaa papaya nadiif ah oo nadiif ah, oo ay sameysay farsamada qalajinta ee qalajinta adduunka ugu horumarsan, waxaan ilaalinaynaa nuxurka nafaqada iyo dhadhanka babayga cusub, kala dirid deg deg ah, oo fududahay in la isticmaalo.
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 45
Aad u dhadhan fiican, uma baahnid inaad biyo ka cabto carrabka hoostiisa oo aad nuugto.